धर्मश्री शारीरिक सुगठन भोलिदेखि – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०६:२६ English
धर्मश्री शारीरिक सुगठन भोलिदेखि
काठमाडौं, १९ असार । नेपाल व्यायाम मन्दिरको आयोजनामा तेह्रौं धर्मश्री राष्ट्रव्यापी शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । ५५, ६०, ६५, ७०, ७५ र ७५ केजी भन्दामाथिमा १ सय पुरुष खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकका अध्यक्ष नारायण प्रधानले जनाएका छन् ।
नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान तालिम केन्द्र, महाराजगन्जमा पहिलो दिन प्रि–जजिङ राउन्ड हुनेछ । प्रि–जजिङबाट प्रत्येक तौलसमूहमा पहिलो हुने खेलाडी पुनः धर्मश्री उपाधिका लागि फाइनल चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल शनिबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ ।
फाइनलमा पहिलो हुनेले २ लाख, दोश्रोले १ लाख, तेश्रोले ७५ हजार, चौथोले ६० हजार, पाँचौंले ५० हजार र छैटौंले ४० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै प्रि–जजिङ राउन्डको प्रत्येक तौलसमूहमा दोश्रो हुनेले २५ हजार र तेश्रोले १५ हजारका दरले नगद पुरस्कार हात पार्नेछन् ।
प्रतियोगितालाई हिरो मोटरबाइकको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङ कम्पनी प्रा.लि. ले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ ।
लोकेन्द्र परियार साविक विजेता हुन् । १२ संस्करणको समाप्तिसम्म नरेश महर्जन र सानु गुरुङले सर्वाधिक दुई–दुई पल्ट उपाधि जितेका छन् ।
१९ असार २०७१, बिहीबार १६:२९ मा प्रकाशित
आईपीएलमा नाटकीय खेल	३ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:०३
फुटबल खेल्न नेपाल आएका विदेशी खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग	२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:३७
आईपीएल : मुम्बाईसँग कोलकता पराजित	१ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:००